बैशाखबाट जलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरिने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
बैशाखबाट जलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
चैत २८, २०७४ 738 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
सरकारले आगामी बैशाखदेखि नेपाल–भारत जोड्ने जलमार्गबारे सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ । भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्दै आर्थिक विकासलाई गति दिन काम सुरु गरिने भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जलमार्ग अध्ययन गर्नबारे आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । सम्भावित विन्दुमा जलमार्ग विस्तार गर्नेबारे अध्ययन गर्न छुट्टै महाशाखा गठन गरिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले बताए ।
‘एक साताभित्रै विशेष महाशाखा बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुन्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अब सरकारले भाषणमात्र गर्छ भन्ने सन्देश जान हुँदैन, बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्ने समय आयो ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको पानीजहाजले नेपाल जोड्ने सपना साकार हुने उनको दाबी छ ।
मन्त्री महासेठका अनुसार जलमार्ग अध्ययनको प्रारम्भिक अध्ययन प्रक्रिया एक सातामै सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सगरमाथाको देशका सागर पुर्याइदिने उदघोष गरेका थिए । रेलमार्ग तथा जलमार्ग निर्माण गर्नेबारे भारतसँग भएको सहमति ठूलो उपलब्धि भएको मन्त्री महासेठको भनाइ छ ।
जयनगर–जनकपुर, जनकपुर–बर्दिबास, बर्दिबास–बिजलपुरा, बिजलपुरा–सिमरा रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पूरा भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘सन् २०१८ भित्र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबासमा रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरिएको छ ।
रेलमार्ग निर्माणको गति बढाउँदै जलमार्ग पनि सँगसँगै अघि बढाउने योजना रहेको महासेठको धारणा छ । ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै भारत कोलकात्ता हुँदै कोसी नदी सीमासम्म जलयातायात सञ्चालन गर्ने तथा समुद्रमा नेपालको जहाज चलाउने भाषण गरेका थिए ।